Ụlọ Nche | Nke 5 n'Afọ 2017
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Batak (Dairi) Batak (Toba) Belorussian Bengali Biak Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Croatian Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Emberá (Northern) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hamshen (Armenian) Hamshen (Cyrillic) Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mari Marshallese Mauritian Creole Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pehuenche Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Pomeranian Ponapean Poqomchi' Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Romany (Northern Russia) Romany (Southern Greece) Romany (Vlax, Russia) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ebe mụ na Tabitha nwunye m nọ n’ozi ọma
Akụkọ Andreas Golec kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1974
ABỤ M ONYE: JAMAN DEMOKRATIK RIPỌBLIK
NDỤ M BIRI: EKWEGHỊ M NA CHINEKE DỊ
NDỤ M BIRI NA MBỤ
Amụrụ m n’obodo Sazoni, n’ebe a na-akpọbu Jaman Demokratik Ripọblik (ya bụ, GDR). Obi na-adị anyị ụtọ n’ụlọ anyị n’ihi na onye ọ bụla hụrụ ibe ya n’anya. Ndị mụrụ m kụziiri m ịna-akpa àgwà ọma. Ọ bụ ndị Kọmunist na-achị obodo anyị. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ ndị nọ na Sazoni ejighị okpukpe kpọrọ ihe. Ekweghị m na Chineke dị. Malite mgbe m dị obere ruo mgbe m dị afọ iri na asatọ, m kweere na Chineke adịghị, kwerekwa n’ihe ndị Kọmunist na-ekwu. Ọ bụ ihe ndị a m kweere mere m ji eme ihe ọ bụla m na-eme.
Gịnị mere Ọchịchị Kọmunist ji na-amasị m? Ọ bụ n’ihi na ha na-ekwu na mmadụ niile hà. Ihe ọzọ bụ na m kweere na e kwesịrị ịna-eke ihe niile obodo nwere otú hà nhata, n’ihi na ọ ga-eme ka a ghara inwe ndị bara oké ọgaranya na ndị ogbenye ọnụ ntụ. Ọ bụ ya mere m ji banye n’òtù ndị na-eto eto nke ndị Kọmunist. Mgbe m dị afọ iri na anọ, m bidoro ịna-atụtụkọta akwụkwọ ndị a tụfuru n’ụzọ iji dowe gburugburu obodo anyị ọcha. E mechaa, mụ ewega ha ebe a ga-eji ha rụpụta ihe ọzọ. Ihe a m na-eme masịrị ndị obodo Aue nke mere ka ndị isi ha nye m asambodo na onyinye iji kelee m. N’agbanyeghị na m dị obere, mụ na ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo anyị a ma ama bịara dị ná mma. Ọ dị m ka ihe ndị a m na-eme bụ ihe kacha mma m ga-eme ná ndụ nakwa na ihe ga-adịrị m mma n’ọdịnihu.
Na mberede, ihe niile gbanwere ná ndụ m. N’afọ 1989, mgbidi Belin e ji kewaa Jamani abụọ dara. Ọchịchị ndị Kọmunist nke na-achị ebe Ọwụwa Anyanwụ Yurop dakwara. Otu na-emepụ, ọzọ esochie. M bịara chọpụta na arụrụala juru eju bara abara n’obodo anyị n’oge ahụ ndị Kọmunist na-achị. Dị ka ihe atụ, a na-eme ndị na-akwadoghị ọchịchị Kọmunist ka ndị na-abaghị uru. Oleekwanụ otú ụdị ihe a si na-eme? Ọ̀ bụ na anyị bụ́ ndị Kọmunist ekwughị na e kwesịrị ịna-emeso mmadụ niile otú ha nhata? Ọ̀ bụ aghụghọ ka ndị Kọmụnist nọ na-aghọ ndị mmadụ? Ezigbo ụjọ jidere m.
M gbanwere ihe m ji ndụ m eme, tinyezie isi n’ịmụ egwú na ise ihe. M banyere n’ụlọ akwụkwọ na-akụzi egwú, buru n’uche imecha gaa mahadum ma ghọzie onye egwú a zụrụ azụ ma na-esekwa ihe. M kwụsịrị ịkpa àgwà ọma niile ndị mụrụ m kụziiri m mgbe m bụ nwata. Ihe kazi m mkpa bụ ikpori ndụ na inwe ọtụtụ ndị enyi nwaanyị. Egwú, ise ihe nakwa ibi ndụ otú masịrị m emeghị ka ụjọ na-atụ m kwụsị. Ihe ndị m na-ese na-egosidị na ụjọ na-atụ m. M na-ajụ onwe m, sị: ‘Olee ihe ga-eme n’ọdịnihu? Olee ihe mere anyị ji dị ndụ?’
Mgbe m mechara mata azịza ajụjụ ndị a, ha tụrụ m n’anya. E nwere otu abalị mụ na ụmụ akwụkwọ ibe m nọ n’ụlọ akwụkwọ ebe ahụ m na-amụ egwú na-ekwurịta ihe anyị chere ọdịnihu ga-adị ka ya. Otu nwa akwụkwọ ibe m aha ya bụ Mandy * gwara m ihe ga-enyere m aka. Nwata nwaanyị a bụ Onyeàmà Jehova. Ọ gwara m, sị: “Andreas, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata azịza ajụjụ gị niile gbasara ndụ na ihe ọdịnihu ga-abụ, mụọ Baịbụl.”
O doghị m anya ma azịza ajụjụ ndị ahụ ọ̀ dịkwa na Baịbụl. Ma m kpebiri ịmụ Baịbụl. Mandy gwara m ka m gụọ Daniel isi nke abụọ. Ihe m gụtara ebe ahụ tụrụ m n’anya. Amụma ahụ kọwara ike ọchịchị ụwa dị iche iche ndị ga na-akpa ike n’ụwa ruo taa. Mandy gosiri m amụma Baịbụl ndị ọzọ kwuru gbasara ọdịnihu. Emechaala m chọtawa azịza ajụjụ ndị na-echu m ụra. Ma, ònye dere amụma ndị ahụ? Ònye nwere ike ikwu ihe ga-eme n’ọdịnihu, ya emee kpọmkwem otú ahụ? Ọ̀ ga-abụ na e nwere Chineke n’eziokwu?
OTÚ BAỊBỤL SI GBANWEE NDỤ M
Mandy gwara otu di na nwunye bụ́ Ndịàmà Jehova ka ha mụwara m Baịbụl. Aha ha bụ Horst na Angelika. Ha nyeere m aka ịghọta Okwu Chineke nke ọma. Achọpụtara m ozugbo na Ndịàmà Jehova bụ naanị okpukpe na-akpọkarị aha Chineke bụ́ Jehova ma na-akụzikwara ya ndị ọzọ. (Abụ Ọma 83:18; Matiu 6:⁠9) M mụtara na Jehova Chineke kwere nkwa na ụmụ mmadụ ga-adị ndụ ebighị ebi mgbe ọ ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs. Abụ Ọma 37:9 kwuru, sị: “Ndị nwere olileanya n’ebe Jehova nọ ga-enweta ụwa.” Obi tọrọ m ezigbo ụtọ ịmata na onye ọ bụla gbalịrị na-eme ihe Chineke kwuru ga-adị ndụ ebighị ebi.
Ma, o siiri m ike ịgbanwe ndụ ọjọọ m na-ebi ma biwe ndụ otú Baịbụl kwuru. Otú ihe si agaziri m n’ịkụ egwú na ise ihe mere ka isi na-ebu m. N’ihi ya, ihe mbụ m kwesịrị ịmụta bụ ịna-adị umeala n’obi. Ihe ọzọkwa bụ na ọ dịghịrị m mfe ịkwụsị ịchụ nwaanyị. Ma, obi dị m ụtọ na Jehova na-enwere ndị na-agba mbọ ime ihe Baịbụl kwuru ndidi, na-emere ha ebere ma na-aghọta ihe ha na ha na-alụ.
Ihe na-ekpebibu ihe m na-eme bụ ihe ndị Kọmunist kwuru nakwa ihe m kweere bụ́ na Chineke adịghị. Ma ọ bụzi Baịbụl na-agbanwe ndụ m kemgbe ahụ. Ihe ndị m mụtara mere ka ụjọ na-atụ m gbasara ọdịnihu kwụsị ma mee ka ndụ m nwee isi. E mere m baptizim n’afọ 1993, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova. N’afọ 2000, m lụrụ Onyeàmà Jehova ibe m aha ya bụ Tabitha. Mụ na ya na-ewepụta oge buru ibu enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe Baịbụl na-ekwu. Otú ọ dịbu m ka ọ dị ọtụtụ ndị anyị na-ezi ozi ọma. Ha ekweghị na Chineke dị, ha ejighịkwa ihe ndị Kọmụnist na-ekwu egwu egwu. Obi na-adị m ezigbo ụtọ ma m na-akụziri ha gbasara Jehova.
URU NDỊ M RITERELA
Mgbe m malitere iso Ndịàmà Jehova, ezigbo iwe were ndị mụrụ m. Ma kemgbe ahụ, ha na-ahụ otú iso Ndịàmà Jehova si mee ka ndụ m ka mma. Obi dị m ụtọ ugbu a na ha na-agụzi Baịbụl, na-agakwa ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova.
Mụ na nwunye m na-ebi n’udo n’ihi na anyị na-agbalị eme ihe Baịbụl kwuru na ndị di na nwunye kwesịrị ịna-eme. Dị ka ihe atụ, ime ihe Baịbụl kwuru ka di ma ọ bụ nwunye ghara ịkwa iko emeela ka anyị na-adịkwu ná mma.​—⁠Ndị Hibru 13:⁠4.
Anaghịzi m echegbu onwe m maka ihe echi ga-abụ. Obi dị m ụtọ na m nọ n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova, bụ́ ezinụlọ dị n’otu n’ụwa niile. N’ọgbakọ Ndịàmà Jehova, mmadụ niile ha nhata, enweghị onye ka ibe ya. Ọ bụ ihe m na-achọ kemgbe ụwa m.
^ para. 12 Aha a kpọrọ ya n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ekweghị M na Chineke Dị
ISIOKWU TETA! A Ndị Mmụọ Ozi Hà Nwere Ike Inyere Gị Aka?
ISIOKWU TETA! A Ihe Ndị Bụ́ Eziokwu Gbasara Ndị Mmụọ Ozi
ISIOKWU TETA! A Ì Nwere Mmụọ Ozi Na-eche Gị Nche?
ISIOKWU TETA! A Ndị Mmụọ Ọjọọ Hà Dị Adị?
ISIOKWU TETA! A Otú Ndị Mmụọ Ozi Si Enyere Gị Aka
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ Ekweghị M na Chineke Dị
ṄOMIE OKWUKWE HA Chineke Kpọrọ Ya “Nne Ndị Eze”
Mmadụ Ò Kwesịrị Inwe Okpukpe Ọ Nọ na Ya?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ndị Mmụọ Ozi Hà Dị Adị n’Eziokwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ndị Mmụọ Ozi Hà Dị Adị n’Eziokwu?
Ndị Mmụọ Ozi Hà Dị Adị n’Eziokwu?
ỤLỌ NCHE Ndị Mmụọ Ozi Hà Dị Adị n’Eziokwu?